China Gabion Box orinasa sy mpanamboatra |Shengsong
Fampiharana:Fanamafisana ny banky;Fanamafisana ny tany;Fanamafisana ny hantsana sy ny fefiloha;Fiarovana amin'ny fianjeran'ny vatolampy, avalanches, fikorianan'ny fako;Rindrina fihazonana;Fiarovana ny fantsona ambanin'ny ranomasina;Landscape Design;Fanamafisana ny fanambanin'ny rano sy ny seranan-tsambo.
Mpanamboatra matihanina izahay ary manam-pahaizana manokana amin'ny boaty gabion nandritra ny taona maro.Ny Gabion Box dia mamaha olana amin'ny sehatry ny fitantanana ny rano sy ny fanamboaran-dalana.Ny rafitry ny boaty Gabion dia vita amin'ny harato miolikolika roa feno vato.Ny boaty Gabion no fitaovana tsara indrindra ho an'ny fanaraha-maso ny fikorontanan'ny tany, ny fanamafisana ny hantsana, ny fametahana fantsona sy ny fanamafisana, ny fiarovana amin'ny banky, sns. Aorian'ny fametrahana vato, ny boaty gabion dia azo apetraka amin'ny endrika firafitry ny rindrina fitazonana ho an'ny tetikasa indostrialy sy lalana.
Gabions Basket no gabion izay voatenona amin'ny harato hexagonal, ny hatevin'ny savaivony dia miankina amin'ny haben'ny harato, ny dia.dia eo anelanelan'ny 2.0mm ka hatramin'ny 4.0mm raha toa ka misy zinc coated ny fitaovana, raha ny dia.dia ho 3.0mm ny 4.5mm raha ny fitaovana dia PVC-mifono tariby, ny selvage tariby savaivony matetika dia iray gauge matevina noho ny vatana tariby dia.Ny tariby koa dia misy amin'ny PVC coating mafy sy mateza.Ny fitaovana dia miteraka fiainana gabion lava kokoa.
Hexagonal Wire Netting Gabion dia fitoeran-tariby vita amin'ny harato tariby hexagonal.Haben'ny Gabion:
2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0,5m, 4m x 1m x 0,5m.Misy baiko manokana.
Ny farany dia mety ho mafana-natsoboka tafo, galvanized aluminium firaka na PVC mifono, sns
Fampiasana Gabion Box:
A. Fanaraha-maso sy fitarihana ny rano na ny tondra-drano
B. Fisorohana ny vaky vato
C. Fiarovana ny rano sy ny tany
D. Fiarovana ny faritra amoron-dranomasina
(Alohan'ny / aorian'ny PVC coating)
teo aloha: Asa tanana Wire
Manaraka: Crimped Mesh